Gbasara anyị - Shijiazhuang Hantex International Co., Ltd.
Uwe nwoke na Ndi Nwanyi
Parka na Jaketị
anyị ipuiche exporting uwe, Ezinaụlọ ngwaahịa, dị iche iche Nkwalite ihe na ahịa gafee ụwa.
Hantex International Co. Ltd. dị na isi obodo Hebei, bụ ebe a na-emepụta Textiles na Garments na China. N’okporo ụzọ awara awara, ọ dị awa 3 n’ebe ugwu ruo ọdụ ụgbọ elu Beijing, na awa isii n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ ruo ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin, yana awa asatọ ọwụwa anyanwụ ruo ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao.
Na afọ 15 'ahụmahụ na mba ọzọ ahia, anyị ipuiche exporting uwe, Ezinaụlọ ngwaahịa, dị iche iche Nkwado ihe ahịa gafee ụwa. Anyi emeputala anyi nke ọma Mechanical and electronic products since 2008. our main items include Cloths ， Home akwa, Uwe, N'ozuzu, Jacket, Uwe elu, Ogologo na nịịka, Rainwear, Nkedo ma ọ bụ forgings na machining akụkụ, nfuli, Dugara SMD , Mbara igwe windo gifts Anyanwụ onyinye, wdg Anyị kwa afọ ahịa bụ banyere $ 8 nde.
Dị ka otu n'ime ndị na-eduga exporting ụlọ ọrụ, anyị ekwesị iwekota technology, ụlọ ọrụ na ahia. Ugbu a, anyị nwere ụlọ ọrụ atọ, otu maka uwe, otu maka Plastic Rainwear na otu maka Casting. Nakwa dị ka anyị jide karịa 50 ụlọ ọrụ na-arụ Ahịrị ihe, ngwa mma na ulo oru mbo dị ka ezigbo mmekọ niile gburugburu China.
Ime ụlọ maka .dịmma
Enwere 3 QC na ngalaba ahia anyị na 2 QC na ụlọ ọrụ ọ bụla. Nke a na-enye anyị ohere iji nlezianya na-achịkwa ogo ma hụ na nnyefe oge.
Main Ngwaahịa Gụnye
Anyị na-ekwe nkwa inye gị
The Mission Nkwupụta Of Company
1) Akwa-Shelo Clothing, Ski suit, Down uwe, ọ bụghị naanị maka ndị nwoke na ndị nwanyị, kamakwa maka Childrenmụaka.
2) kindsdị mmiri ozuzo niile, nke PVC, EVA, TPU, PU Akpụkpọ anụ, Polyester, Polyamide na ihe ndị ọzọ.
3) Uwe oru, dika Uwe elu, Cape na Apron, Jacket na Parka, Pants, Shorts na n’ozuzu ya, tinyere
ụdị ụdị uwe na-atụgharị uche, nke nwere asambodo nke CE, EN470-1, EN533, EN531,
BS5852, NFPA2112 na ASTM D6413.
4) Ndị ọzọ na ngwaahịa na ụlọ
1) Ọrụ kacha mma, ogo dị elu na ọnụ ahịa asọmpi
2) zaghachi ozugbo, Sample n'ime 7days, Nyefee na oge.
3) Obere iwu anabatara.
Ọrụ na-emepụta uru, ọkachamara na-enweta akara
N'ịbụ onye guzosiri ike na 2008, Hantex dị na Shijiazhuang obodo nke Hegbè Hebei, nke bụ ebe dị mkpa nke ụlọ ọrụ akwa na akwa na China. Ọ bụ otu awa iji Beijing obodo site High-Speed ​​okporo ígwè. Site na gwongworo, ọ bụ awa anọ na Port Tianjin na awa isii na Port Qingdao na Highway.
Na 20years 'ahụmahụ na mba ahia, anyị ipuiche exporting tumadi Soft-shei Clothing, Ski Garments, Down Garments, Fashion Rainwear, Work Cloths na Ezinaụlọ Products na Europe, USA na South America, Africa, South-East Asia na Middle East, wdg.
Dị ka otu n'ime ndị na-eduga exporting ụlọ ọrụ, anyị jide karịa 100 ụlọ mmepụta ihe dị ka ezi mmekọ niile gburugburu China, nke na-arụ Textile, Plastic akwa, uwe, Hardware wdg
Anyị nwere ndị otu ọkachamara itinye usoro njikwa njikwa dị mma. Anyị nwere nkwanye ùgwù dị mma na ngwaahịa na ọrụ ahịa. Anyị na-aiming ibu Sourcing Center na China maka Ahịa.
Igosi Na Canton Fair
Biko gagharịa na ebe a na-egosi ihe nkiri iji chọta ihe ị chọrọ, wee zitere anyị ozi taa. A ga-enwe ekele dị ukwuu na ajụjụ gị ma anakwere iwu OEM / ODM.
Faksị. + 86-311-87823360
Gini bu ihe kacha ewu ewu na ...
Covid-19 ewetawo nnukwu mmetụta na naa ...
Kedu otu esi ahọrọ uwe kacha mma n'èzí?